Uru nke n'ibu ogwe aka-akpụ igwe - China Longkou Fushi mbukota
A dvantages nke n'ibu ogwe aka -akpụ igwe
Akpụ ebe bụ ibu. Irè akpụ ebe bụ 1100 × 1400mm, bụ 1.4 karịa omenala igwe, ọ pụrụ ime ndokwa ọzọ igbe. Iche na omenala nlereanya nke ebu nwere ike ndokwa 20 igbe, 28 igbe n'ibu nlereanya nke ebu nwere ike ndokwa.
Production na-agba bụ ngwa ngwa. Okpomọkụ igbe ikewapụ n'ime atọ, haịdrọlik ọnwụ ọsọ bụ ngwa ngwa, na-eji n'ibu ogwe inu ngwaahịa, niile n'elu ụzọ belata dum na-arụ ọrụ oge.
⑴ Heating igbe ngụkọta ogologo bụ 4.4m, dịtụ ịgbatị kpo oku oge, na-ezere n'elu elu okpomọkụ agbazekwa mpempe akwụkwọ, na n'otu oge ahụ na-eme ka mma nke abụọ asụ Ụfụfụ mmetụta.
⑵ Hydraulic cylinder bụ ibu. Traditional nlereanya haịdrọlik cylinder mụụrụ bụ 160mm, mgbe n'ibu nlereanya nke bụ 220mm, kọntaktị ebe dịkwuo 1 oge, nrụgide na unit ebe mbelata, ka ịgbatị ya ndụ. Ka ọ dịgodị, mmetụta na haịdrọlik circuit na solenoid valvụ ọnụ, ịgbatị ha ndụ kwa.
⑶ Mechanical ogwe aka tojupụtara ngwaahịa na abụọ, nke ịzọpụta omenala nlereanya si ebu belt mmepụta oge, dịkwuo mmepụta ọsọ on dum.
Mechanical ogwe aka nlereanya mmepụta ọsọ nwere ike iru 18-22cycles / min, onye ọ bụla hour nwere ike 33000-37000pcs nri ehihie igbe. Mgbe omenala nlereanya mmepụta ọsọ bụ 12-15cycles / min, ie ọ bụla hour nwere ike 12000-18000pcs, naanị ọkara arụmọrụ nke n'ibu ogwe aka nlereanya.
The ihu ihe onwunwe n'etiti nke abụọ igbe na omenala nlereanya ebu nwere na-banyere 2cm, mgbe ọhụrụ n'ibu ogwe aka nlereanya bụ adịghị n'elu 1cm. Nke a ukwuu belata mmefu ihe onwunwe, mee ka ndị ọzọ okokụre ngwaahịa.
Zọpụta manpower, na belata na-eri. The abụọ ụdị iji otu manpower, mkpa 3 ọrụ / mgbanwe, otú iji ọhụrụ n'ibu ogwe aka nlereanya pụrụ ibelata mmepụta na-eri, na-eme ihe uru.
Ara na sere nri containers elu. Ọbụna containers adịghị ṅụrụ si ịga nke ọma, nke a ga-emetụta esote aga.
Ịcha ebe nwere ike ime: chụpụrụ site moto, ọ bụ bara uru maka na-agbanwe agbanwe na Ebu na ike ịzọpụta oge nke na-agbanwe agbanwe Ebu.
Electrostatic eliminators na-setịpụrụ na ịcha ebe, na nchekwa ebe, o nwere ike iwepụ ihe ndị static emepụta n'oge akpụ usoro. Ka n'aka nchekwa nke producting.
The ndu rails na-mere nke igwe anaghị agba nchara,-anọte aka karịa aluminum ndu rails
Post oge: Jul-12-2018